यौन स्वास्थ्य – PuraKhabar
प्राचिनकालमा कसरी हुन्थ्यो सेक्स ? हेर्नुस पत्याउनै गाह्रो पर्ने रहस्य
एजेन्सी – वर्तमान समयको हामी जस्तोे सबैलाई ‘सेक्स ट्रेन्ड्स’ अर्थात् यौन प्रथाबारे थाहा नै होला । तर धेरैलाई यो थाहा नहोला कि सेक्सको अनौठो प्रथा शताब्दीऔँ पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो । शताब्दी पहिले सेक्सबारे ७ अनौठो प्रथाहरु थियो । संक्षिप्तमा हेर्नुहोस के थिए ति ७ अनौठो प्रथाहरु – १. लिपिस्टक र ओरल सेक्स प्राचीन इजिप्टमा लिपिस्टिक लगाउनुको अर्थ तपाई ओरल सेक्सका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । बिशेषगरी, इजिप्टका दरबारी यौनकर्मी आफ्नो ओरल सेक्सपटाइज देखाउनका लागि लिपिस्टिक लगाउने गर्थे । यहीबाट लिपिस्टिक र ओरल सेक्सको सम्बन्ध बाहिर आएको थियो ।…
मेरी आमा यौनकर्मी भए पनि मेरोलागी भगवान भन्दा ठुलो हुन्, उँहाकी छोरी हुनमा मलाई गर्व छ…
June 15, 2018 पुराखबर
के तपाईंले कहिले भगवान देख्नुभएको छ ? २३ वर्षीया तंजिला खातून डान्स ड्रामाको पूर्वाभ्यासमा जानुभन्दा पहिले यस्तो प्रतिप्रश्न गर्छिन् । प्रश्न गरेपछि उत्तर आफैं दिन्छिन्, ‘यो धर्तीमा लाखौं छोरीजस्तै मेरी आमा पनि मेरो लागि भगवान् हुन् । तर मेरो आमाको सम्मान म आफूमात्र गर्छु । संसारका अन्य मानिसहरुबाट उनले गाली खानुपर्छ किनभने उनी यौनकर्मी हुन् ।’ तंजिला डान्स ड्रामाको पूर्वाभ्यास गर्दा बिचमै नखसोस् भन्नका लागि उनले आफ्नो पाउजुको पुनः परिक्षण गर्छिन् । पश्चिम बंगालको २४ परगान जिल्लामा बस्ने तंजिलाले आफ्नो पढाई बिचमा नै छोड्नु पर्यो किनभने उनकी आमा यौनकर्मी हुन्…
बेद र धर्म ग्रन्थमा यौन सम्बन्धबारे के भनिएको छ ? धर्मका पुराना ग्रन्थहरुमा यौनका कुरा
June 12, 2018 June 12, 2018 पुराखबर
जतिसुकै आधुनिक भएपनि हिन्दु बाहुल्य रहेका र बेदका चर्चा हुने नेपाल र भारत जस्ता देशमा यौनको विषय भने वर्जित छ । मानिसहरु यौनको विषयमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । यौनका विषयमा कुरा गर्दा सहज मानिँदैन । अझ यौनलाई धर्मसँग जोड्ने गरिएको छ । यौन बारे कुरा गर्दा वा यौन सम्बन्ध राख्दा धर्म विरुद्ध हुने समेत कतिपय मानिस ठान्छन् । तर त्यही धर्मका पुराना ग्रन्थहरुमा यौन सम्बन्धबारे गरिएका कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । हिन्दुहरुको चर्चित हिन्दु धर्मग्रन्थ महाभारतको एक अध्यायमा ऋषि पराशर र सत्यवती मत्स्यगन्धाबीच खुला स्थानमा यौन क्रिडा चलिरहेको…
यसरि राखिएको यौनसम्पर्कमा हुन्छ गर्भधारण l
June 11, 2018 Jhabindra Devkota
एजेन्सी ,कसरी यौन सम्पर्क गर्दा गर्भधारणा हुन्छ कसरी गर्दा हुँदैन एकपटक अवश्य पढौं यौनसंपर्कको तरिका, समय तथा यौनसंपर्कको अघि वा पछि गरिने विभिन्न क्रियाकलाप आदिलाइ लिएर गर्भधारण हुन्छ या हुन्छ भन्नेमा विभिन्न गलत धारणा रहिआएको पाइन्छ। स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षाको कमी तथा अरुका तथ्यहिन कुरा सुन्ने र त्यहि पालाना गर्ने हाम्रो बानीले पनि यस्ता धारणाहरु फैलिरहेका छन्। केहि चलिआएको गलत धारणालाइ तल प्रस्तुत गरिएको छ। १. यौनसंपर्कको गर्नु अगाडी हस्तमैथुन गर्नाले :धेरैको यस्तो सोचहुन सक्छ कि, यौनसंपर्क अगाडी हस्तमैथुन गर्नाले यौनसंपर्कको विर्य कमहुन्छ अनि गर्भधारण हुने सम्भावना कम हुन्छ। यो…
घिउ लगाएर शारीरिक सम्वन्ध राख्दा यस्तो हुने रहेछ अचम्मको फाइदाहरु…
यसै पनि घिउको धेरै फाइद हुने गर्दछ । तर यदी कुरा सम्भोगको छ भने घिउको अझै नै महत्वपुर्ण फाइदाहरु रहेका छ्न । आउनुहोस जानौ के के फाइदाहरु हुन्छन त : १) यदी तपाईंले सुद्धा गाउको घिउ लागाएर सम्भोग गर्नुभयो भने तपाईंको पट्नरको योनी कहिले खुकुलो हुँदैन । २) तपाईं रेगुलर घिउ खाने गर्नु भएको छ भने तपाईं धेरै समय सम पनि जवान देख्न सक्नु हुनेछ । ३) जो ब्यक्ती घिउ लगएर सम्भोग गर्छ , त्यस ब्यक्तीलाई सम्भोग पछी कुनै प्रकारको इन्फेक्सन हुने डर हुँदैन । ४) सम्भोगको समय घिउ लगाउँए…
यौनसंग जोडिएको केहि रोचक जानकारी
May 27, 2018 पुराखबर
१. कुनै देशमा नवविवाहित दुलहीले पहिलोपटकको सम्भोग अघि कुखुराको चल्लाको रगतले भरिएको सानो व्याग योनिमा राख्छन् । केही देशमा भने भेडाको जमेको रगत योनिमा राख्ने चलन छ । २. धेरै अनुसन्धानकर्ताहरू छाला सबैभन्दा ठुलो सेक्स अङ्ग र दिमाग सबैभन्दा शक्तिशाली ठान्छन् । ३. किन्स्ले इन्सिच्युटका अनुसार वीर्य स्खलन हुँदाको गति २८ माइल प्रतिघण्टा हुन्छ । ४. महिलाको चरम आनन्द (अर्गाज्म) को रेकर्ड एक घण्टामा १ सय ३४ पटकको छ । ५. १० देखि १२ प्रतिशत महिलाले कहिल्यै चरम आनन्दको अनुभव गरेका हुँदैंनन् । सेक्स सिम्बोलको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लोकप्रिय अभिनेतृ…
यौनसम्पर्कका बेला टाउको दुख्ने समस्या
May 6, 2018 पुराखबर
म काठमाडौं घर भएको ३६ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । ५ वर्षअघि मेरो विवाह भएको हो । मेरी एउटी छोरी पनि छिन् । ४ वर्षअघिसम्म हाम्रो यौन जीवन सहज थियो र ममा सधैं उत्साह रहन्थ्यो । एक वर्षयता म अचम्मखालको रोगबाट पीडित भएको छु । मेरो समस्या के छ भने जव म यौनसम्पर्क गर्छु, लगत्तै मलाई टाउको दुख्छ । पहिले यसलाई मैले सामान्यरुपमा लिएको थिएँ, किनभने मलाई कहिलेकाहीँ टाउको दुख्नु सामान्य हो भन्ने लाग्दथ्यो । जब यौन सम्पर्कपछि मलाई टाउको दुख्छ भन्ने थाहा भयो, त्यसपछि म यौनसम्पर्क राख्न डराउन थालें…
के सेक्सको लत वास्तवमा एक रोग हो ?
हामीले निकोटिन, रक्सी र लागुऔषधजस्ता नशालु पदार्थको लतलाई स्विकार गरेका छौं । यसले पुर्याउने क्षतीलाई पनि स्विकारेका छौं । तर यदि सेक्सको लतको कुरा आए विशेषज्ञको धारणा बाँडिएको छ । केहीले सेक्सको लतलाई स्विकारेका छन् भने कतिले अस्विकार गर्दै आएका छन् । सेक्सको लतलाई अहिले रोगको रुपमा लिइएको छैन त्यसकारण कति मानिसले यसका लागि चिकित्सकीय परमार्श मागेका छन्, यसको कुनै आधिकारिक डेटा पनि उपलब्ध छैन । पोर्न र सेक्सको लतसँग जुधिरहेकाको मद्दतका लागि विकास गरिएको वेबसाइटले ब्रिटेनमा २१ हजार मानिसमाथि सर्वेक्षण गर्यो । यी मानिसहरुले सन् २०१३ पछि वेबसाइटसँग मद्दतका…
मेथीका दानाले पुरुषको यौन शक्ति बढाउने
April 24, 2018 पुराखबर
अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा गरिएको एक अध्यनले मेथीका दानाको सेवनबाट यौन शक्तिमा अत्याधिक वृद्धी हुने र कामेच्छा पनि बढ्ने तथ्य बाहिर आएको छ । ब्रिसबेनस्थित आणविक चिकित्सा केन्द्रका अनुसन्धानकर्ताले मेथीमा पुरुषका लागि कामेच्छा र यौन शक्ति बढाउने तत्व पाइने खुलासा गरेका हुन् । मेथी नेपाल र भारतमा मसलाकोरुपमा नियमित प्रयोग हुने खाद्य हो । मेथीका दानामा हामीले सोंचेको भन्दा कैयौ धेरै फाइदा हुने अध्यनका क्रममा पाइएको छ । यौन क्रिडाको अवधी लम्ब्याउनका लागि पश्चिमा औषधीहरु प्रयोग भैरहेको समयमा पश्चिममा नै गरिएको अध्यनमा भने मेथी यसका लागि प्रभावकारी रहेको तथ्य बाहिर आएको हो…
कहिले कहिँ सहबास गरिसके पछी पछुतोको भावनाआउँछ ? तर किन थाहा छ ? यो पढ्नुहोस
April 22, 2018 April 22, 2018 पुराखबर
काठमाडौँ । अचानक कसैसित शारीरिक सम्बन्ध हुनुलाई क्याजुअल सेक्स भनिन्छ । पहिला सहमतिमै सम्बन्ध बन्छ तर क्याजुअल सेक्सपछि प्रायः महिलामा पछुतोको भावनाले घेर्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार सेक्सको पहल युवतीले गर्छे र यसमा उसलाई रमाइलो अनुभूति भयो भने पछुतो हुँदैन । युरोप अमेरिका तथा अन्य विकसित मुलुकमा हिजोआज ‘वन नाइट स्ट्यान्ड’ गर्ने चलन बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रायः महिलाहरुलाई सेक्सपछि पछुतोको भावना बढी हुने अध्ययनमा देखिने गरेको छ । महिलाका तुलनामा यस्तो सम्बन्ध राख्ने पुरुषमा पनि यस किसिमको भावना देखिए पनि अलि कम हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष…